साइप्रसमा यो नयाँ अफरको साथ नयाँ वर्षमा घण्टी दिनुहोस् यात्रा समाचार
धेरै व्यक्ति गन्तव्य चयन गर्न छनौट गर्दछन् नयाँ वर्ष स्वागत छ। किनकी यी तरीकाले मितिहरूमा केही मौलिक गर्न सक्षम हुने तरिका हो। यदि तपाईं त्यो यात्राको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंले सँधै सपना देख्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई उत्तम विचार भन्दा बढी सहयोग गर्दछौं। साइप्रसमा नयाँ वर्षको घण्टी बज्दै!
त्यहाँ तपाईंले दायाँ खुट्टामा नयाँ वर्ष सुरू गर्न आवश्यक सबै चीजहरू भेट्टाउनुहुनेछ। भोजमा पार्टनर तर अति सांस्कृतिक पदयात्रामा। एक उत्तम ककटेल जुन तपाईं निश्चित रूपमा लामो समयको लागि सपना देख्दै हुनुहुन्छ। खोज्नुहोस् महान प्रस्ताव जुन हामीले तपाईंको लागि चयन गरेका छौं।
1 साइप्रसमा नयाँ वर्षमा बज्नको लागि प्रस्ताव
2 क्रिष्टमसको बेला साइप्रसमा के हेर्ने र गर्ने
2.1 साइप्रसमा एक दिन स्कीइ।
2.2 कोलोसी कैसल
2.4 सान Hilarion को महल
साइप्रसमा नयाँ वर्षमा बज्नको लागि प्रस्ताव
कहिलेकाँही हामी यस्तै समयबाट भाग्नुपर्दछ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले क्रिसमसको आत्मालाई बिर्सनु पर्छ, बिल्कुल विपरीत। हामी यस क्षणलाई तर विश्वको अर्को भागमा मनाउन जारी राख्न सक्छौं। यस अवस्थामा हामीले साइप्रसलाई छनौट गरेका छौं किनभने त्यहाँ हामीले सब भन्दा राम्रो स्तरहरू शुरू गर्न सक्नेछौं। त्यसोभए के सोच छ तिम्रो तीन दिनसम्म यस्तै गन्तव्यमा बिताउनुहोस् र तपाइँले सोचे भन्दा कमको लागि।
यो जहाँ प्रस्ताव छ दुबै उडान र बसाई समावेश छन्। तिनीहरू मध्ये पहिलो, म्याड्रिडबाट th० औं प्रस्थान छ। जबकि फिर्ती जनवरी २ मा छ। थप रूपमा, यो याद राख्नु पर्छ कि मूल्यले चेक गरिएको लग्गेज समावेश गर्दछ। छनौट गरिएको होटेल 'कपेटानियोस ओडिसिया' हो जसमा दुई रेस्टुरेन्टहरू छन्, बालकनी सहितको कोठा, पौंडी पोखरी र सौना। थप रूपमा, यो धेरै राम्रो अवस्थित छ किनकि यो केन्द्रबाट 30 किलोमिटर मात्र छ। अवश्य पनि, यी सबै राम्रो सद्गुणहरू, तपाईं सोच्नुहुनेछ कि उनीहरूले मूल्य बढाउँछन्, तर होईन। यस अवस्थामा दुबै उडान र बसाई दुबैको ती तीन दिनमा ब्रेकफास्टको साथ24 युरो छ। के यो राम्रो विचार होईन र, यदि हो भने, तपाईं यसलाई बुक गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम समय.
क्रिष्टमसको बेला साइप्रसमा के हेर्ने र गर्ने
कुनै श doubt्का बिना, यो ती गन्तव्यहरू मध्ये एक हो जुन तपाईं पहिलो नजरमा माया गर्नुहुन्छ। छ भूमध्य टापु यसको एक एकल सौन्दर्य छ जसको बीचमा पुरातात्विक अवशेषहरू पाउन सकिन्छ साथै सबैभन्दा प्याराडाइसियल समुद्री किनारहरू पनि पाइन्छन्। परम्पराले भन्छ कि यो त्यो ठाउँ हो जहाँ अफ्रोडाइटको जन्म भएको थियो, त्यसकारण, यसको आधारमा, हामीलाई थाहा छ कि यो एकदम विशेष चीज हो।
साइप्रसमा एक दिन स्कीइ।
हामी th० तारिखमा आइपुग्दा हामीसँग kind१ औं बिहान पनी कुनै किसिमको गतिविधि गर्न सक्षम हुनेछौं। यस क्षेत्रमा राम्रो परिचित मध्ये एक स्कीइ is हो। यसका लागि हामीसँग छ ओलम्पस माउन्ट गर्नुहोस्, जहाँ तपाईं यसको १ 1952 6२ मिटर उचाईमा अचम्मित हुनुहुनेछ, ठाउँका मुख्य आकर्षणहरू मध्ये एक भएकोले। यससँग tra ट्र्याकहरू छन्, प्रत्येकको विभिन्न लम्बाई र जटिलता छ। यहाँबाट तपाईंसँग अक्रोटिरी प्रायद्वीप वा साल्ट लेक तिर उत्तम विचारहरू छन्।
महल १ XNUMX औं शताब्दीमा बनाइएको थियो र मा छ लिमासोलको बाहिरी भाग। योसँग एक ठूलो धरहरा छ जुन २० मिटर भन्दा अग्लो छ। जहाँबाट हामी यसका वरिपरिको सबै चीजको प्रभावकारी दृष्टिकोण राख्दछौं। पछाडि हिंड्नुहोस् जुन पार गर्न लायकको छ।
सबैभन्दा प्रसिद्ध पुरातात्विक साइटहरू मध्ये यो एक हो। कुनै श doubt्का बिना, यो चट्टानको फेदमा अवस्थित छ, त्यसैले यो दृश्यहरू प्रभावशाली भन्दा बढी छन् भनेर बिना नै जान्छ। त्यहाँ हामी केही राम्ररी संरक्षित मोज़ेकहरू साथै थियेटर क्षेत्र पनि देख्न सक्छौं Eustolios घर.
सान Hilarion को महल
यस महलमा किंवदन्तीहरू भीड हो बिस्तारी। ती मध्ये एउटा यो हो कि यो परियोंको रानीले बनाएको हो, जसले त्यस ठाउँलाई मन पराउँछन् र त्यहाँ बस्छन्। यसको प्रभावशाली दृश्यहरू छन्, पर्खाल र क्षेत्रहरूद्वारा घेरेको जुन पर्वतबाट लिइएको देखिन्छ।
La कार्पास प्रायद्वीप अर्को बिन्दुलाई ध्यानमा राख्नु हो। मौसम राम्रो छ वा छैन, हामी यसको वरिपरिको सुनौलो समुद्री किनारहरू छुटाउन सक्दैनौं। यद्यपि यो सब भन्दा धेरै अवलोकन गरिएको क्षेत्रहरू मध्ये एक होइन, यो सत्य हो कि यसमा जादुई कुनाहरू, ऐतिहासिक शहरहरू जस्तै दीपकार्पज वा एगिओस फिलोनको चर्च पनि छ।
जहाँ तपाईं हेर्नुहोस्, सबै स्थानहरू अविश्वसनीय छन्। तेसैले ट्रोडोस यो धेरै पछाडि छैन। चर्चहरू र मठहरूले यसलाई ताज दिन्छ। थप रूपमा, मध्यकालीन कालको विशिष्ट धेरै भित्ति चित्रहरूको साथ यो पत्ता लगाउन सधैं आवश्यक हुन्छ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो तपाइँले अपेक्षा गरेको भन्दा र केवल तीन दिनमा क्रिसमस धेरै गहन हुनेछ। तर यदि तपाईं आफैंलाई संगठित गर्नुभयो भने, तपाईं पक्कै पनि यी सबै र अधिकमा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। साइप्रसमा नयाँ वर्षको घण्टी बज्दै!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » साइप्रसमा नयाँ वर्षको घण्टी बज्दै
साओना टापु, डोमिनिकन रिपब्लिकको अज्ञात